A Michigan Marijuana Dispensary waxay siisaa wadashaqeyn bilaash ah qofkasta oo qaata tallaal isku-dhafan-19 • Dawooyinka Inc.eu
In kasta oo adduunku wali la dhibtoonayo Coronavirus, farmashiyaha xashiishka ee Michigan ayaa qaatay siyaasad aan caadi ahayn oo dadka looga dhaadhiciyo inay is tallaalaan. Farmashiyaha Green House-ka ayaa lacag la’aan ku siisay sigaar xashiishad hore loo duubay oo dadka caddeyn kara in laga tallaalay fayraska.
Farmashiyaha Green House-ka wuxuu ka bilaabay barnaamijkiisa 'Weelasha Toogashada' Walled House, Michigan, isagoo isku dayaya inuu siiyo dhiirigelin dheeri ah muwaadiniinta si ay ugu kaxeeyaan kalagoysyada bilaashka ah xarumaha tallaalka.
Milkiilaha dukaanka Jerry Millen ayaa u sheegay CNN, "Dhamaanteen waan walaacsanahay, laakiin waxaan rajeyneynaa in tallaalku ugu dambeyn soo afjari doono aafadan, waxaana kaliya oo aan dooneynaa inaan abaalmarinno dadka safka hore kaga jira helitaanka tallaalka."
"Haddii aan gacan ka geysan karo joojinta masiibada si uun, tanina waa habka anigoo siiya kala-goysyada bilaashka ah waan sameyn karaa, sidaas ha ahaato."
Kordhinta wadajirka bilaashka ah ayaa loo kordhiyay
Qoraal ay soo dhigeen bartooda Instagram, Green House waxay ku sheegeen in kuwa doonaya inay ka qaybqaataan ololahan ay heli doonaan a free wadajirka waa inay caddeeyaan inay mar hore heleen tallaalka.
Makhaayada marijuana ee Michigan waxay siisaa wadar bilaash ah qofkasta oo qaata tallaalka Covid-19 - Instagram (afb.)
Waxay intaas ku dareen, "Waxaan dhamaanteen rajeyneynaa in tallaalka 'Covid' uu bilow u yahay dhammaadka cudurkan faafa ee sida xun ugu dhuftay deriskeenna, bulshooyinkayaga iyo dalkeenna.
"Haddii aad dooratid inaad hesho tallaalka 'Covid' (marwalba waxaan taageernaa xorriyadda doorashada), tani waa habka aan kuugu mahadcelineyno wadashaqeyn bilaash ah oo naga caawisay inaan joojino cudurkan faafa oo aan caadi ku soo noqonno."
Gobolka Michigan, isticmaalka xashiishadda madadaalada ayaa sharci ahayd tan iyo 2018, kadib markii gobolka afti loo qaaday. Shirkadaha ay dowladu ansixisay waxay awoodeen inay iibiyaan dawada ilaa iyo 2019.
In kasta oo ololaha markii hore loo qorsheeyay inuu socdo bil kaliya, milkiilaha Millen ayaa lagu soo waramayaa inuu sheegay in haddii dadku u baahan yihiin waqti dheeri ah, ay ka fiirsan doonaan kordhinta dalabka.
Marka loo eego tirooyinkii ugu dambeeyay, Michigan wax yar ayey ka dambeysaa xagga tallaalka, maadaama keliya 6,3% dadka deegaanka ah ay heleen tallaalkii ugu horreeyay. The New York Times sidoo kale waxay soo warinaysaa in ka badan 25 milyan oo qof inay hadda heleen qiyaastii ugu horreysay ee Mareykanka.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN, CannabisDispensaryMag (EN), CNN (EN)
Saliid CBD: Hype ama daaweyn? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ku saabsan
Waxaa laga yaabaa inaad horay ugu aragtay iyaga farmashiyaha: dhalooyinka ay ku jiraan 'CBD oil' oo saaran ...
Canopy Growth Corp (Weed) ayaa soo wariyay Arbacadii, Nofeembar 14 rubuc labaad oo faa'iido ah ...